रामकुमारी झाँक्रीलाई केपी ओलीसँग भिडाउने तयारी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रामकुमारी झाँक्रीलाई केपी ओलीसँग भिडाउने तयारी !
नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर बन्न लागेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटी गठबन्धनको सरकारमा सहभागि हुने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको उक्त पार्टीले सरकारका नियुक्तीहरुकमा भागबण्डा पनि पाइरहेको खबर आइरहेका छन् ।
यसैबीच माधव नेपालको पार्टीबाट कम्तीमा ५ जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री बन्ने लगभग सहमति भएको खबर प्राप्त भएको छ । यस्तै, लामो समयदेखि रिक्त उपसभामुख पद पनि माधवकै पोल्टामा पर्ने सम्भावना रहेको छ । एमाले सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजनीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा दलहरुले अहिले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।
अहिले उपसभामुख पद एमाले विभाजन गरेको माधव नेपाल पक्षलाई दिने तयारी भएको छ । गठबन्धन स्रोतका अनुसार, उपसभामुख नेपाल पक्षलाई दिने र त्यसमा पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई बनाउनुपर्ने मत रहेको छ ।
झाँक्री स्वयम्ले भने हुने भए मन्त्री हुने नत्र पार्टीको काममा लाग्ने भन्दै आएकी छिन् । निकटस्थहरुसँग उनले मन्त्री भएर केही काम देखाउन पाए हुने भन्ने गरेकी छिन् । तर, उपसभामुखमा झाँक्रीलाई लैजाने गठबन्धनको चाहनाको रणनीति भने रोचक छ ।
खासमा झाँक्री एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को विरोधी हुन् । एमालेमा हुँदादेखि नहुँदासम्म एकअर्काका प्रति खुबै प्रतिशोधी भावनामा रहेका दुवै जनालाई एउटै मञ्चमा राख्ने मनसाय गठबन्धनको देखिन्छ ।
गठबन्धनका एक नेताको भनाइमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओली र झाँक्रीलाई आमनेसामने बनाउने उनीहरुको तयारी हो ।
विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओली सहभागी हुँदा झाँक्री चाहिं उपसभामुखको हैसियतमा उपस्थित हुनेछिन् । त्यसैले पनि झाँक्रीलाई उपसभामुख बनाउने गठबन्धनका नेताहरुको तयारी हो । तर, झाँक्री उपसभामुखभन्दा शिक्षामन्त्री बन्ने चाहनामा रहेको सूचना प्राप्त गरेको छ ।